Ama-microorganisms abizwa ngokuthi i-leptotriks angokwezihlobo zama-bacteria a-gram-negative, ahlala emzimbeni wamanzi ahlukahlukene. Bangabuye baphile emanzini okupompo namachibi okubhukuda. Ngisho nasezinkathini lapho odokotela bebona i-leptotriks ngesisindo, lokhu akusho ukuthi lesi sifo satholwa emzimbeni wesifazane ngendlela yezocansi. Ngaphezu kwalokho, i-leptotriks ye-bacterium ingatholakala emgodini womlomo.
Igama lamabhaktheriya anaerobic lalibangelwa ukufana nezinwele ezinde (iLeptos isho ukuthi "mncane", futhi i-thrix yi "izinwele"). Ama-leptotriks amancane namathanga amade abonakala ngokucacile uma enza i-microscopy smear. Uma ukuhlolwa kwelabhorathi wezintatheli ze-smear bethola i-leptotrix kowesifazane, khona-ke kuzodingeka enze ezinye izivivinyo ezengeziwe. Lokhu kungenxa yokuthi lezi zincane ezincane zivame ukuhambisana nezifo ezinjalo eziyingozi njenge-trichomonads ne-chlamydia. Ngaphezu kwalokho, i-leptotryx itholakala kwabesifazane abakhulelwe ngegciwane lesandulela ngculazi, futhi nabantu abane-HIV. Uma la ma-microorganisms ehlala emlonyeni womlomo, khona-ke angabangela ukulimala okukhulu emazinyo.
Ukuxilongwa nokuphathwa kwe-leptotriksa
Ochwepheshe abafanelekayo ukwembulwa ngesifo smear sowesifazane walezi zingqikithi zobunzima akwenzi. Ziyabonakala ngokugcwele emkhakheni wokukhanya we-microscope evamile. Lezi zincane ezincane zibukeka njengezintambo nemigqa ehla. Ukuze ekugcineni uqinisekise ukuxilongwa, owesifazane kufanele abe nezifundo ezengeziwe. Ngenxa yalokhu, odokotela basebenzisa izindlela ze-PCR ne-bacussis. Ikholomu yedatha yama-bacterial anaerobic iqala ngokuphindaphindiwe uma imvelo yendawo yayo ikhula ngokwanda kwe-carbon dioxide.
Odokotela abaningi ababheki i-leptotriks ibhaktheriya ye-pathogenic. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, uma kunezibonakaliso ze-leptotriks (izindawo ezimpunga esibhakabhakeni, ulimi kanye namathoni, ukukhishwa kwamaginja wombala ofanayo, namabala ezindongeni zawo), kusadingeka ukwelashwa. Ikakhulukazi lapho kwenzeka khona izinqubo zokuvuvukala, ezithandwa yizi zinyamane ezincane. Yiqiniso, indoda enokuxhumana ngokocansi ne-leptotrichosis (futhi leli gama liyithwala lesi sifo) ngeke isuleleke, kodwa ingabangela izinkinga ezinkulu owesifazane. Ngakho-ke, i-leptotriks ye-bacterium iyimbangela yamaphutha, kanye nokuthuthukiswa kwezinkinga zebhaktheriya emntwaneni.
Ngeshwa, nazo zonke izimpumelelo zemithi yomhlaba, ukwelashwa nge-leptotriks uma kutholakala ngesifo smear ngokwama-standard avumelwanga amacebo akukwenziwa ngenxa yokungabikho. Ukusebenza kahle kakhulu, kodwa kuboniswa yizidakamizwa ezinjenge-tetracycline, i-levomycetin, i-clindamycin ne-metronidazole. Ukuze ukwelashwa kube yimpumelelo, odokotela beluleka owesifazane ukuba aqhube izifundo eziningi ezengeziwe ukuze anqume ukutholakala kwamagciwane ngama-antibiotic. Akukhuthazwa ngesikhathi esifanayo sebenzisa ukwelashwa kwama-antibiotic e-leptotrichosis, okuyi-series ye-fluoroquinalone.
Uma umzimba wesifazane uthinteka ngukutheleleka okuxubile, ama-antibiotic okuthiwa yi-wide spectrum of action kufanele akhethwe. Lezi zidakamizwa ziphumelela kakhulu ngokumelene nama-causative agents of this infection.
Ukuxwayisa lesi sifo esiyinkimbinkimbi kunzima, kepha kungenzeka. Isimiso esiyisisekelo nesisekelo okufanele sibonwe yibo bonke abesifazane ukugcina imithetho elula yokuhlanzeka komuntu siqu. Uma indlu kuwe engekho isihlungi esikhethekile sokuhlanza amanzi okupompi, bese uphuza emthonjeni akufanele. Lapho ugeza emanzini omhlaba avulekile, zama ukugwinya ngengozi emanzini emlonyeni, okuyinto i-leptotriksa yindawo yokuhlala yemvelo.
Ubuningi be-endometrium buyinto evamile
Amangqamuzana engeziwe we-mammary ngaphansi kwegundane
Uphathwa kanjani i-ureaplasmosis?
I-Lymphostasis emdlalweni webele
Kungani ababibi behlonywa?
Kungani i-lumbar period ibuhlungu?
Polyp esibelethweni - izizathu
I-Duphaston noma i-Utrozhestan - engcono?
Ukuntuleka kweprogesterone - izimpawu
Pepper sweet ebusika - zokupheka for the okumnandi kunazo ukudla okusemathinini
URyan Philip ulele embhedeni
Iyini umgodi wokuthengisa - izigaba nezibonelo
Ukuhlobisa udonga ekhishini
I-scallops ethosiwe - iresiphi
I-Sepia - i-homeopathy
Yini okufanele uyenze ukuze ulahlekelwe imilenze yesisindo?
I-seborrheic dermatitis - ukwelashwa
Ukutshala ukhukhamba endaweni yokushisa eyenziwe nge-polycarbonate, ukuhlwanyela kokutshala imifino yokushisa
Kusho ngokumelene nokugubula
Ukuxubha ngenyama enhlobonhlobo
Ama-hemorrhoids angaphakathi - ukwelashwa ekhaya
UKira Knightley, u-Elizabeth Hurley nabanye abakuleli qembu le-Opera "La Traviata"
13 izimiso eziyoba nomthelela omuhle kuwe esikhathini esizayo
U-Amber Hurd waphinda wamemezela kuJohnny Depp emaphoyiseni
I-gastritis eyingozi - ukwelashwa ngamakhambi abantu
Inkukhu ephuziwe ne-gelatin